" ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာပြောပြလာတဲ့အုပ်စိုးခန့်'' - Cele Gabar
” ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာပြောပြလာတဲ့အုပ်စိုးခန့်”
By KoePosted on June 10, 2022
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချိုသာတဲ့အသံပိုင်ရှင်အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။ အမြဲသီချင်းတွေကို နားဝင်ချိုအောင်သီဆိုနိုင်ပြီး ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ အသည်းကျော် အဆိုရှင်လို့တောင် ပြောရမှာပါ။
အဆိုဘက်မှာသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း​ြာဝင်ရိုက်ကူးထားခဲ့သူပါ။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှုများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိမှာလည်း Youtube ကပေးအပ်တဲ့ ”Another mile stone achieved!!!! ❤️YouTube Award 🏆ကျနော်ရဲ့ချစ်ရသောကွေကာအုပ်လေးတွေ​ကြောင့်ဒီဆု့ကိုရတာပါ ..ဒီထက်ပိုပီးကြိုးစားပါ့မယ် 💪🏻..သီချင်းအသစ်တွေလဲYouTubeမှာအများကြီးလာမည် …… ❤️🖐🏻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုပိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာ​ပါ။
ကြော်ငြာရိုက်ကူးမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး သီချင်းအသစ်တွေလည်းမကြာခင်ထွက်ရှိဦးမှာ​ြဖစ်တဲ့ အတွက် အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ ပရိသတ်တေ​ွအတွက်ကတော့တကယ့်ကို ပျော်စရာသတင်းကောင်းပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း အုပ်စိုးခန့်အတွက်ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေပြောကြားခဲ့ပါဦးနော်။
” ထူးျခားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြေၾကာင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာေျပာျပလာတဲ့အုပ္စိုးခန္႔”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ အုပ္စိုးခန္႔ကေတာ့ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ခ်ိဳသာတဲ့အသံပိုင္ရွင္အဆိုေတာ္တစ္ဦးပါ။ အၿမဲသီခ်င္းေတြကို နားဝင္ခ်ိဳေအာင္သီဆိုႏိုင္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီးထုႀကီးရဲ႕ အသည္းေက်ာ္ အဆိုရွင္လို႔ေတာင္ ေျပာရမွာပါ။
အဆိုဘက္မွာသာမက သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလည္းကြၽမ္းက်င္တဲ့ အုပ္စိုးခန္႔ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာလည္း​ျာဝင္႐ိုက္ကူးထားခဲ့သူပါ။ အုပ္စိုးခန္႔ကေတာ့အသက္ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူျဖစ္တဲ့အျပင္ လက္ရွိမွာလည္း Youtube ကေပးအပ္တဲ့ ”Another mile stone achieved!!!! ❤️YouTube Award 🏆က်ေနာ္ရဲ႕ခ်စ္ရေသာေကြကာအုပ္ေလးေတြ​ေၾကာင့္ဒီဆု႔ကိုရတာပါ ..ဒီထက္ပိုပီးႀကိဳးစားပါ့မယ္ 💪🏻..သီခ်င္းအသစ္ေတြလဲYouTubeမွာအမ်ားႀကီးလာမည္ …… ❤️🖐🏻”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေနာက္တစ္ခုပိုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပလာခဲ့တာ​ပါ။
ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ကူးမႈေတြဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနၿပီး သီခ်င္းအသစ္ေတြလည္းမၾကာခင္ထြက္ရွိဦးမွာ​ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အုပ္စိုးခန္႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေတ​ြအတြက္ကေတာ့တကယ့္ကို ေပ်ာ္စရာသတင္းေကာင္းပါပဲေနာ္။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း အုပ္စိုးခန္႔အတြက္ဂုဏ္ျပဳစကားေလးေတြေျပာၾကားခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post ” ချစ်သူကောင်လေးရှေ့မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို သွက်လက်စွာ ကပြနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်”
Next post ” မေလသံစဥ်နဲ့အတူရိုက်ကူးရေးတွေပြုလုပ်ကာ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကရှူတင်အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တဲ့ နေထွဋ်”